Otu esi họrọ aha aha Sikh maka gi ma obu nwa gi
Okpukpe na nke ime mmụọ Aha Sikh Ụmụaka
Ihe Ị Chọrọ Ịmata tupu Ịhọrọ Sikh Nwa Aha
Sikhism na-akpọ omenala na Usoro
Ụkpụrụ Iwu na Sikh Nam
Ị bụ onye ọhụrụ na Sikhism, ma ọ bụ na ị ga-eche otú ị ga-esi họrọ aha Sikh nwere ihe ime mmụọ ? Nke a bụ aro ole na ole ga-enyere gị aka ịhọrọ aha nwa zuru oke, ma ọ bụ aha ime mmụọ maka onwe gị.
A na-ewere aha Sikh ka ọ bụrụ na ọ bụ mgbe niile ka edere ya na Guru Granth Sahib .
Aha Sikh n'ozuzu ha enweghi oke umu nwoke ma obu umu nwanyi.
Nne na nna na-ahọrọ aha nwa mgbe a mụrụ nwa, maọbụ obere oge mgbe e nyere nwa ahụ Guru Granth Sahib maka ememe aha nwa Sikh . Ụmụaka a mụrụ n'ụlọ ọgwụ ndị nne na nna na-ahọpụtaghị aha na-enye ndị anakpo oge na-ekwukarị "nwata nwoke" ma ọ bụ "nwa ọhụrụ" tinyere aha nne ha. A ga-agwụ akwụkwọ asambodo na izu ole na ole na aha aha nwa ahụ. Ọ bụ ihe dị mma ịmara ụkpụrụ iwu gị na ihe ndị chọrọ gbasara akwụkwọ a mụrụ tupu a mụọ nwa gị iji zere mmehie ọ bụla. Ndozi na ndozi nye asambodo nke nwa nwere ike ịchọ ka ndị dọkịta bịanye aka na aka, nkwupụta, ma ọ bụ ikpe ụlọikpe, nke nwere ike ịba uru na oge.
Na narị afọ gara aga, nakwa dị ka ọ dị n'oge a, ndị na-ede iwu nwere ike inye nwunye nwanyị aha ọhụrụ n'oge alụmdi na nwunye . Nwunye ma ọ bụ nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ nwere ike ịchọkwa ịkpọ aha nwunye ha. Na mgbakwunye na aha ahụ a họọrọ, onye na-alụ nwanyị ọhụrụ na-agbakwụnye nkwụsị nke Singh na aha aha ahụ. Nwunye ahụ na-agbakwụnye ngọngọ nke Kaur na aha aha.
Ndị nwere mmasị ịtụgharị na Sikhism nwere ike ịme aha aha Sikh n'oge ọ bụla, ma enwere ike ịnye aha ọzọ Guru Granth Sahib ma ha kpebie ịbanye na okwukwe Sikh.
Onye na-ebido nwere ike iburu aha ime mmụọ mgbe ọ na-anata Amrit , n'oge ememe nke mmalite Sikh. Akara omenala Sikh na-agụnye ngọngọ nke Kaur maka ụmụ nwanyị na Singh maka ụmụ nwoke. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na a kpọrọ aha na mbido. Onye nhazi nwere ike were aha ikpeazụ nke Khalsa .
Ịhọrọ aha Sikh
Usoro maka ikpebi aha bụ ịhọrọ Hukam , ma ọ bụ Vak nke bụ amaokwu ọhụụ nke guru Guru Granth nke a na-ewere dịka iwu Guru nke Chineke. Akwụkwọ mbụ Gurmukhi nke amaokwu ahụ, na-achọpụta akwụkwọ mbụ nke aha ahụ a họọrọ. Mepụta aha pụrụ iche nwere ihe ime mmụọ pụrụ iche maka onwe gị, ma ọ bụ nwa gị , site n'ịgbakwunye ụkọ. Nchịkọta aha nwere ike ịgụnye okwu ndị metụtara kpọmkwem site na ntụ.
Otu n'ime ụzọ ndị e depụtara ebe a bụ ihe a na-anakwere maka ịnweta usoro nke ga-ekpebi akwụkwọ ozi ahụ, ka a họrọ.
Nye ekpere nke ardas n'ihu amaokwu Sikh, Guru Granth. Nke a nwere ike ijikọta ya na onyinye nke prashad , ihe oriri dị nsọ site n'ịgụ abụ nke Anand Sahib . Meghee akụkụ Akwụkwọ Nsọ na peeji nke ọ bụla, ma gụọ usoro ahụ.
A na - ahọrọ ụtụ kwa ụtụtụ n'Ụlọ Nsọ ahụ mara Sikh dị ka "Darbar Harmandir Sahib" , na Amritsar India, a pụkwara ịchọta ya na ntanetị ụbọchị ọmụmụ nwa, ma ọ bụ mgbe ọ bụla mmadụ na - ahọrọ ịhọrọ aha.
Aha a na-ahọrọ n'oge mbido, a na-enweta site na akwụkwọ mbụ nke edemede ahụ a gụrụ na njedebe nke ememme Amrit .
Aha ngalaba na aha aha
Ụfọdụ Sikhs na-ahọrọ aha agbakwunyere aha ha na mpaghara ha maka ụmụ ha, dabere na akwụkwọ mbụ nke usoro ahụ, nke nwere ike ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị enwe mkpa ime mmụọ. Otú ọ dị n'ebumnobi bụ ezi mkpebi ikpe. N'ebe e nwere ntinye uche tinyere obi ime mmụọ, na ịdị nsọ dị n'ime, ọ dịghị ihe dị n'èzí Chineke.
Janam Naam Sanskar (Sikh Baby Naming)
Aha umuaka Sikh nke puru iche site n'inye ihe ime mmuo
Aha Sikh na-amalite na S
Aha Sikh Aha ndi malitere site na P na Ph
Okwu Mmalite nke aha Sikh
Ekpere Sikh, "Jamia Poot Bhagat Govind Ka"
Aha Sikh na aha na Z
Aha Sikh Aha ndi na - amalite na L
Aha Sikh na-amalite na M
Aha Sikh na aha na G
Aha Sikh aha ndi na-amalite na K
Bipute Mpempe akwụkwọ na Microsoft Access 2013
Otu esi eme ka ọla kọpa kpoo ọla
Top 8 Njikwa Ntugharị Online na-eduzi n'asụsụ Bekee
Eziokwu Eziokwu Banyere Amphibians
Nne nwanyị 600-Pound na-enye nwa nwa 40-paụndụ?
Kedu ka m ga-esi eji ejiji ice?
Ndị Bombers ahọrọ nke Agha Ụwa nke Abụọ
Obodo Islam nke oge ochie: Obodo, obodo, na isi obodo nke Islam
Kedu ihe dị iche iche dị iche iche nke asụsụ Chinese (Character 日 (rì)
Kwesịrị Ka Oge Na-ekiri Ndị Na-ekiri M?
Ọnwa gị na ọrịa cancer: Gịnị ka ọ pụtara?
Ụmụ nwoke 10,000-Meter World Records
Ịgụgharị na Ngwakọta
Ntuziaka site na Anchorman
Akwụkwọ Ọchịchị New England University Admissions
Ndị Dinosaur na ndị na-ahụ maka ọdịbendị nke Utah
Colin Ferguson na Long Long Railroad Mursacre
Mahadum Baptist Baptist Dallas
Osimiri Mussorgsky n'Ugwu Ala
Ọ Pụrụ Ịhụ Nzuzo na Snow?
American Revolution: Isi General Benjamin Lincoln
Egwú kachasị mma nke Revival Folk 1960
Agha Napoleonic: Vice Admiral William Bligh
Kedu ihe bụ Lean na Rich dị ka etinyebere na Nitro RCs?
RGB RGB na TColor: Nweta More TColor Values ​​for Delphi
Ịdọ Aka ná Mmụọ: Ofufe